တစ်ဦးကတနင်္ဂနွေကာလအတွင်းခရီးသွားဖို့အတွက်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဦးတည်ရာနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > တစ်ဦးကတနင်္ဂနွေကာလအတွင်းခရီးသွားဖို့အတွက်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဦးတည်ရာနေရာများ
ရထားများအတွက်လေယာဉ်မြောင်းနှင့်တစ်ဦး Weekend Wonder များအတွက်ဥရောပခရီး. အဘယ်သူမျှမကဆက်ပြောသည်အခကြေးငွေနှင့်အတူမိနစ်အတွင်းစာအုပ်ဆိုင်ရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ဦးကရထား Save, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခံစားနိုငျ စုထားသောငှေ လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်! ဤတွင်ဘို့ငါတို့ရွေးချယ်မှုများမှာ ရထားကတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းသွားလာဥရောပအကောင်းဆုံးဦးတည်ရာနေရာများ.
အကောင်းဆုံး တံခါးပေါက် တစ်ဦးတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းသွားလာဥရောပမှာနေရာများ: ဘာစီလိုနာ
ကျနော်တို့စပိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြိမ်အနည်းငယ် chatted င့်. သင်တို့သည်ငါတို့၏သည်အခြားဆောင်းပါးများထွက်စစျဆေးနိုငျ ဒီမှာ. ယနေ့တွင်, ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်များ ရထားကတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းသွားလာဥရောပအကောင်းဆုံးခရီးဆုံးများအာလုံးဘာစီလိုနာအပေါ်ရုံအာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.
ဘာစီလိုနာဥရောပဒေသအများစုထံမှဝင်ရောက်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်ရည်ညွှန်း၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အ, ကျနော်တို့ကနေထွက်ခွာပါလိမ့်မယ် လန်ဒန် ဒီခရီးစဉ်များအတွက်. မှာအလုပ် Leave2တစ်ဦးကသောကြာနေ့တွင်ညနေ, အချိန်အတွက်ဖမ်းရန်3ညနေ ပဲရစ်မှ Eurostar. တစ်ဦးတစ်ဦး vin Rouge ဘို့ပဲအချိန်ရှိပါတယ် Parisian ကဖီး ဘာစီလိုနာရန် "မီးရထားဟိုတယ်" boarding မတိုင်မီ.
ဖြစ်ကောင်းဘာစီလိုနာအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာ, အဆိုပါ Sagrada Familia. အဆိုပါ basilica ဗိသုကာပညာရှင် Gaudi ကဒီဇိုင်းခံခဲ့ရသူတို့ကတည်းကအစဉ်အဆက်ကဤဖွဲ့စည်းပုံကိုတည်ဆောက်ခြင်းပြီ 1882. ဒါဟာခက်ခဲရိန်းမပါဘဲပုံရတဲ့င့်, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေသွားရောက်ရကျိုးနပ်သည်.
Secret ကိုဘာစီလိုနာအစွန်အဖျား: အဆိုပါ basilica ၏ backside တွင်သင်သည်အံ့သြဖွယ်ဓာတ်ပုံများယူနိုင်ပါသည်ရှိရာကနေသေးငယ်တဲ့ရေကန်လည်းမရှိ. ခိုင်မာတဲ့သင့်ရဲ့ Instagram ကိုဂိမ်းသိမ်းဆည်းထားပါ, ဤအရပျသွားရောက်ပေးဆောင်.
တစ်ဦးကnother Gaudi အားဖြင့်ကျော်ကြားသောဖွဲ့စည်းပုံမှာ CASA Batllo ဖြစ်ပါသည်. မနီးမဝေးလာ့စ်ဗီး Ramblas ကနေတည်ရှိပြီး, သင် Passeig က de Gracia မှာဒီအထူးအဆောက်အဦကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ 1877. သင်ဤအဆောက်အဦသွားရောက်ခြင်းနှင့်လည်းအတွင်းပိုင်းကြည့်ဖို့လိုအရိုးစုကိုထားလျှင်, ကြိုတင်မဲအတွက်သင်ကလက်မှတ်တွေဝယ်ယူရန်သေချာအောင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လူကြိုက်များခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု ဘာစီလိုနာနှင့်အတော်လေးအလုပ်ရှုပ်ရနိုင်, အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးရာသီအတွက်.
ပျော်စရာအဖြစ်မှန်: CASA Batllo ၏လက်ရှိပိုင်ရှင် Bernat မိသားစုဖြစ်ပါသည်, known for being the owners of Chupa Chups Lollipop.
အဆိုပါ9တနင်္ဂနွေညတွင်ရထားဟိုတယ်သည်လန်ဒန်အလယ်ပိုင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည် 11:55 တနင်္လာနေ့ဖြစ်ကြောင်းကို.
အကောင်းဆုံး တံခါးပေါက် တစ်ဦးတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းသွားလာဥရောပမှာနေရာများ: ရောမမြို့
အဆိုပါထာဝရစီးတီးအစဉ်အဆက်အဖြစ်သှေးဆောငျဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မပါဘဲတစ်ဦး Weekend ထွက်ပြေးဖို့အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ဘူး! အဘို့အပဲရစ်မှာတစ်ဦးတွင်နေ့လည်စာ Eurostar နှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုယူ ရောမမြို့. ထဲမှာညစာကျော်ရစ် စားသောက်ဆိုင်ကားတစ်စီး, သင့်ရဲ့ရန်အနားယူ ညဉ့်အဘို့အိပ်ပျော်သို့မဟုတ် couchette, နှင့်တစ်ဦးဂန္အီတလီရှုခင်းမှနိုး.
ရောမမြို့ကအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် အကြိုက်ဆုံးမြို့ကြီးများ ဥရောပမှာ. သငျသညျပျားရည်ဆမ်းခရီးပေါ်မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်လျှင်. သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ. လူတိုင်းအတွက်အရာတစ်ခုခုကိုသော်လည်းရှိပါတယ်. ထိုအရပ်ကိုမြင်ကွင်းများနှင့်အတူလြှံမပြည့်စုံသည်နှင့်သမိုင်း၏နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုယ်တိုင်ကအပေါ်သို့ layered ထားပြီး - သငျရောမဆိတ်ညံရာအရပ်ကနေ Renaissance ရန်ဒီနေရာကိုအရာအားလုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ် အတတ်ပညာ. ဒါဟာအိမ်တွင်းစိတ်ကူးဖို့လည်းဖွင့် အစာ! မုချ3ရောမမွို့ရှိရက်မြို့ပူဇော်ဖို့ရှိတယ်လို့လုံးဝအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေသငျသညျဆိုပါကရှိသမျှကိုပျေါလှငျကိုတွေ့မြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့င် သင်၏အချိန်ကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်.
ဗာတီကန်စီးတီးသည်ရောမသို့သင်အလည်အပတ်ခရီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာင်, ရောမမြို့အတွင်းပိုင်း, နှင့်အပါအဝင်ကမ္ဘာကျော်က်ဘ်ဆိုက်များမှနေရာဖြစ်သည် ဗာတီကန်ပြတိုက်, အဆိုပါ Sistine Chapel, နှင့်စိန့်. ပေတရု၏ Basilica.
အကြှနျုပျတို့သညျနံနကျစောစောကဒီမှာလာနှင့်သင့်နှင့်အတူဗာတီကန်ပြတိုက်ဘို့ဖြောင့်ခေါင်းအကြံပြု လိုင်းကိုကျော်သွား လက်မှတ်. ကျနော်တို့ကဒီ post ကိုထပ်မံပေါ်ရောမမြို့မှာရှိတဲ့လိုင်းများကိုကျော်သွားဖို့နည်းလမ်းတွေကိုဖုံးလွှမ်း, သင်မူကားတစ်ဦး Omnia ရောမမြို့နှင့်ဗာတီကန် Pass နှင့်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ Skip မျဉ်း entry ကိုများအတွက်အချိန်အပိုင်းအခြားများအား-စာအုပ် pre ဖို့ option ကိုရပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးတနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းသွားလာဥရောပအကောင်းဆုံး Gateway မှာဦးတည်ရာနေရာများ: ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်အမ်စတာဒမ်
အသစ်က-ish မြန်နှုန်းမြင့် Eurostar နှင့်အတူ အမ်စတာဒမ်မှလန်ဒန်လေ့ကျင့်. လန်ဒန်နဲ့ဘရပ်ဆဲလ်အကြားခရီးယူရန်အသုံးပြု5ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ရထား၏ပြောင်းလဲမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်နေနာရီနှင့်. အသစ်ရထားအလိုတော် တင်ဆောင် 900 ခရီးသည်တစ်ဦးတစ်ရက်သာကြာမြင့်မည်4နာရီ. တနင်္ဂနွေအဘို့အဘရပ်ဆဲလ်သို့မဟုတ်အမ်စတာဒမ်မှတစ်ဦးခရီးစဉ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော!
တစ်ဦးတနင်္ဂနွေ Gateway မှာစဉ်အတွင်းဘရပ်ဆဲလ်အဘယ်သို့ပြုကြရန်:
လုပ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့်တစ်ဦးတိုတောင်းတနင်္ဂနွေခရီးစဉ်အပေါ်. ဒါဟာတာရှည်တနင်္ဂနွေအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းရဲ့, လူအပေါင်းတို့သည်ရှာဖွေစူးစမ်း သမိုင်းဝင် က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သင်တို့အပေါ်မှာသင်တို့လက်ရနိုင်အပေါငျးတို့သ waffles ကျမဲ.
သငျသညျက Grand Place သွားရောက်လည်ပတ်ပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဒါဟာအရေးမပါဘူး, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသွားရောက်နိုင်အောင်လှပသောကြောင်းဧရိယာရဲ့. နီးပါးပြန်ချိန်းတွေ့ 300 နှစ်ပေါင်း, ဂရန်းရာဌာနလွဲချော်လွန်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်.
ယခုနှစ်အချို့သောအချိန်များတွင်, သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖြစ်ရပ်များ, စျေးကွက်, နဲ့အနုပညာတပ်ဆင်. နှစ်ဦးစလုံးဟာစတုရန်းပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့သောဘရပ်ဆဲလ်စီးတီးပြတိုက်တွင်နှင့်မြို့တော်ခန်းမသို့သွားရောက်ရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့.
ပဲရစ်မှ Liege ရထား
ဘရပ်ဆဲလ်အ Liege ရထား
ဘရပ်ဆဲလ်အကြီးမားဆုံးရှိပါတယ် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်, အဆိုပါကွီးမားဆုံး) ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်ရုံး. ယခု, အချို့သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်လုပ်ပေမယ်ကြောင်းကိုသင်၏ခရီးစဉ်ကိုရပ်တန့်မနေသင့်သည်လက်ရှိတွင်လည်းမရှိ - တကယ့်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အ.
သင်တို့သည်ငါတို့၏အကြံပြုချက်များ၏အဘယျထင်ပါသလဲ? ကျနော်တို့သိရန်ကိုချစ်ချင်ပါတယ်! သတိရ, တစ်ဦးကရထား Save သုံးစွဲဖို့စူပါလွယ်ကူသည်နှင့်ဘယ်တော့မှကုန်ကျစရိတ်ဖုံးကွယ်! ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရထားဖြင့်သင့် Weekend ကွာဘွတ်ကင်လုပ်ရန်, ယနေ့တွင်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-weekend%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/ဠိကို/ဒုိး/သင့္ေတာ္ေသာပိုပြီးဘာသာစကားများ.
#casabatllo #palaisdejustice #sagradafamilia #တနင်္ဂနွေ ဘာစီလိုနာ Eurostar အားလပ်ရက်များ travelamsterdam travelrome ဆေးရုံ